On Video DVD ah (Digital Video cajalid ama Digital boosaska badan cajalid), waxaad ka arki kartaa noocyada kala duwan ee file taas oo ka kooban Audio, Video, Cinwaan, Cutubyada, Manu oo badan faylasha nidaamka dadka kale warbixin looga baahan yahay inuu ka ciyaaro DVD ah. ".VOB" Waa faylka ay ku jiraan qalab maqal iyo muuqaalka ah ee DVD kasta oo ay.
Faahfaahinta DVD ayaa xakamaynaya file kasta VOB shaqsi mudada ugu badan ee 1GByte. Waxaa jira siyaabo kala duwan si uu u badbaadiyo content videos DVD ee aad PC / laptop sida file image ISO DVD samaynaysaa ama nuqul kaliya, ee la soo dhaafay "VIDEO_TS" buuga ka xididka DVD ah. Laakiin xalka ugu wanaagsan waa in la badalo DVD videos aad qaab MP4 sida qalab badan oo la qaadi karo ay u taageeraan oo ay ku jiraan waxyaabaha Apple.
In this article, waxaana idin tusin Sida loo Beddelaan VOB (files DVD Video) si MP4 la Loss Tayada Zero.
Part1: Best VOB in MP4 Video Converter
Part3: Aqoonta Extended u VOB iyo MP4.
Sida caadiga ah beddelaad ah VOB video tayo sare leh galay MP4 loo baahan yahay waqti badan u-socodka ah, maxaa yeelay, size of file VOB ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira baakadaha software aad u badan oo dunidan ku isticmaalaana diinta file VOB galay MP4, laakiin " Wondershare Video Converter Ultimate "ayaa noqonaya mid aad loo jecel yahay sababtoo ah halka ay horey barbardhigo farsamo" Madax-ilaa-Head ", taas oo jeer X30 ka dhaqso badan converters kale.
Wondershare Video Converter Ultimate waa ka badan Converter ah.
Ka dib markii qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee software this.
• Beddelaan 159 video format ay ka mid yihiin HD, 4K iyo 3D.
• 30x soomi video diinta. Taageero DLNA-ka dhisay.
• Stream warbaahinta in TV via streamers warbaahinta sida Chrome ee kabka (Roku, Apple TV, Madaxweyne Siilaanyo 360 ama PS3).
• video Transfer cable USB aan.
• Edit, In kor loo qaado, iyo shakhsiyeeyo Media.
• Samaynta DVD la menu iyo template.
• Download YouTube Video - Mid ka mid ah la Click!
Beddelaan VOB in MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate la Loss Tayada Zero on Windows
Tallaabada soo socda ay gargaar hagitaan talaabo ay ku tusaan sida ay u badalaan file VOB aad galay MP4.
Tallaabada 1 Import / dar file VOB aad
Ku rakib iyo Orod aad "Wondershare Video Converter Ultimate"
Sida software waxaa ka mid ah hawlaha badan oo kale, hubi in aad ku jirto suuqa kala midig.
Ka dibna riix badhanka "Faylal ay dar".
Window soo socda u muuqataa
(Fiiro gaar ah: Waxaa jira files kala duwan VOB galka VIDEO_TS ay ka mid yihiin "adverting" iyo "isjiidka" video file inta ugu muhiimsan ee la magaca "VT_01_1.VOB" Haddii aan dooro files kale oo waa weyn oo cabbirka..)
Dooro file VOB aad.
Dooro "file ugu weyn", oo guji "ok".
Riix hoos "Qaabka Output".
Ka dib markii aad ka dooran qaab wax soo saarka aad la doonayo oo kaliya in la hubiyo in sharaxaad of file saarka sax yahay, sida duration file iyo qaab.
Hadda waxaan diyaar u yihiin diinta. Just guji "badalo" button.
Habka diinta ku bilaaban doono.
Software waxa kale oo aad macluumaad kale oo ay muujinaysaa sida, waqtiga ka harsan tahay, Falanqeynta boqolkiiba dhameystirtay iyo movie.
Part2: VOB Free in Converter MP4
Waayo, kuwa aan rabin in uu lacag iibsigu ku xusan software, Wondershare sidoo kale barayaa " Wondershare Video Converter Free "la audio inta badan caadi ah / video taageeray files.
Wondershare Video Converter Free kuu ogolaanaya in aad 10 watermark free video beddelaad la qaababka ay editable qurux gebi ahaanba bilaash ah.
Wondershare Video Converter Free sidoo kale waxay bixisaa:
Sidaas oo kale waxaan u isticmaali kartaa software xiiso leh si loogu badalo naga "VOB" file galay "MP4" gabi ahaanba xor ah oo aan wax lacag ah bixinin hal ruqsad ama watermark ah waxa on.
In ka dib markii qaybta waxaan sidoo kale ku siin aad talaabo talaabo hanuuniyo si aan idiin tuso sida loo isticmaalo " Wondershare Video Converter Free "loogu badalo" VOB "in" MP4 "
Step By Step Guide for VOB in Converter MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Free
Tallaabada 1 VOB Add File
Ku rakib iyo Orod aad "Wondershare Video Converter Free"
Markaas riix batoonka "Faylal ay dar".
Laga soo bilaabo folder VIDEO_TS dooro file size VTS_01_01.VOB weyn.
DVD filimada mar walba oo kala qaybsantaa qaybo badan, in aan ka badnayn 1GB kasta.
Sidaas dooro file hore ka furmo suuqa iyo dooro "fur"
Sida aad ka arki kartaa waqtiga qaar ka mid ah ay sabab u tahay maqnaanshaha nidaamka gudbiyo software ma akhrisan kartaa warbaahinta buuxa.
In sharaxaad aad ka arki kartaa in dhererka guud ee file waa 00:32:24
Kiiska noocan oo kale ah ay tahay in aad gacanta ku dari harsan qaybo VOB ee u iib ah
Wixii ku daray qaybo dadka kale, ku celi tallaabo 1,
i Guji "dari file
Dooro harsan labada files oo guji "Open"
VOB video files had iyo jeer ku jira size xogta la mid ah,
Waa kuwee waxay naga caawinaysaa si fudud loo aqoonsaday ka files VOB dadka kale.
Hubi in dhammaan qaybaha ku amar sax ah
Dooro dhammaan faylasha iyo dooro "MP4" sida file natiijada
Guji "wax soo saarka" format
Dooro "qaab / Video / MP4"
Haatan waxa ay ku yar adag.
Sida ay jiraan 3 files idiin qaybiyey ayaa doonaya in uu badalo faylka MP4 hal
Fiiri sanduuqka "marge oo dhan videos galay mid ka mid file".
Tani badalo doonaa dhammaan saddex qaybood oo qaab ah MP4 hal
VOB waa kordhin file qaab file video shay la isticmaalay ku kaydiso video-lo iyo files audio isticmaali DVDs hadda ah.
files VOB ku jiri kara saddex durdurrada: audio, video (MPEG-2) iyo subtitles.
MP4 waa kordhin files multimedia, kaas oo ah qaab weel oo keydin karta oo video, audio iyo xogta Cinwaan (iyo sidoo kale in ka badan ku xiran tahay content) a. Waxa uu noqday in ka badan oo caan ah tan iyo dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weel tan, oo loo isticmaalo la iPod iyo Playstation la qaadan karo (PSP) sida dhisay taageero, files MP4 waxay noqdeen in ka badan oo caan ah.
VLC, KMPlayer, ALLPlayer, Elmedia, gacan-jabis, Pinnacle Studio, PowerDVD iyo qaar badan oo
Qaab VOB wuxuu ku salaysan yahay qaab MPEG il barnaamijka.
MIME Type Video Video, Guuritaanka-image, Sound, Aggregate
VOB in DVD
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan VOB in MP4 la Loss Tayada Zero on Windows iyo Mac